Wizz Air: Atsaharo ny fitohizan'ny sendika any Okraina!
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Wizz Air: Atsaharo ny fitohizan'ny sendika any Okraina!
Septambra 10, 2020
Taorian'ny fanafihana ny zon'ny mpiasa sy ny fahalalahana hiaraka amin'i Wizz Air any Ukraine, ny Federasiona Mpiasa momba ny fitaterana eropeana (ETF) sy ny federasiona ho an'ny mpiasa amin'ny fitaterana (ITF) dia manentana ny tompon'andraikitra mba handray andraikitra. Tamin'ny volana jolay dia mpikambana efatra sy mpitarika sendika efatra no noroahina tany Kyiv, nanala sarona ny toe-tsain'ny mpanohitra ny sendika indray.
"Miasa amin'ny fomba mety tsara izahay, ara-dalàna tanteraka," hoy ny Tale Jeneralin'ny Wizz Air József Váradi omaly tamin'ny resadresaka nifanaovan'ny Eurocontrol. Ny fihetsika farany nataon'ny orinasa tany Okraina dia nametraka io fanontaniana io ho fanontaniana. Tamin'ny volana Mey, nisy sendikan'ny seranam-piaramanidina nisoratra anarana tany Ukraine, nisolo tena ny mpiasan'ny Wizz Air tao amin'ny tobin'i Kyiv. Avy hatrany ny fitantanana dia nanao fanentanana fanoherana ny sendika izay niafara tamin'ny volana Jolay, tamin'ny fandroahana mpiasa efatra: Yuliia Batalina (lehiben'ny sendika), Artem Tryhub (mpikambana ao amin'ny filankevitry ny sendika), Hanna Teremenko (ny lefitry ny sendika), ary Andriy Chumakov (mpikamban'ny sendika).
“Fanafihana mazava ny zon'ny mpiasan'ny Wizz Air handamina sy tetika fampitahorana izaitsizy”, hoy i Josef Maurer, Lehiben'ny fiaramanidina ETF. “Mpiasa ao amin'ny Wizz Air izy ireo nandritra ny taona maro. Mpikambana miasa mafy avokoa izy rehetra, voaporofon'ny fanombatombanana nataony taloha sy ny fandraisany anjara tamin'ny asan'ny orinasa. ”
Tsy vao izao ny Wizz Air no nanohitra ny sendika. Tamin'ny volana martsa 2019, nanapa-kevitra ny Fitsarana Tampony any Romania fa manavakavaka ny mpiasa ny Wizz Air noho ny maha mpikambana azy ao amin'ny sendikan'izy ireo. “Ny tranga romana dia manaporofo fa tsy ambony noho ny lalàna ny Wizz Air. Nandresy tamin'ny alàlan'ny tolona nataony ho an'ny zon'izy ireo ny mpiasa, ary mbola hanao izany indray izy ireo, "hoy i Eoin Coates, sekretera mpanampy ny sidina sivily ITF.
Miara-miasa amin'ireo mpiasa voaroaka ny ETF sy ny ITF dia nametraka fanangonan-tsonia an-tserasera. Samy miantso ny manampahefana Okrainiana ny federasionina sendika mba hanadihady momba ny fiampangana be loatra momba ny fanitsakitsahana ny lalàna mifehy ny asa ary miantoka ny fanarahan'ny Wizz Air ny lalànan'ny asa Okrainiana.
NewTree Ranch dia mitantara fanandramana tsy manam-paharoa sy fialan-tsasatra
United Airlines dia manitatra ny fanoloran-tenany amin'ny fahasamihafana ao amin'ny Board Room